Ciidanka DANAB oo la wareegay degaano ay ku sugnaayeen Al-shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska DANAB ayaa lagu soo warramayaa inay howl-gallo qorsheysan ka sameeyeen agagaarka magaalada Jamaame oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Sidoo kale ciidamada Danab ayaa baaris ku sameeyey goobihii ay isaga baxeen dagaalyahanada Kooxda Al-Shabaab. Xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan, iyada oo dhaq dhaqaaqyo ciidan laga dareemayo duleedka degmadq Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose.
XOG: Sarkaalkii Amray Ciidankii Eretariya joogay in ay ka qeyb qaataan Dagaalkii TPLF oo la ogaaday